Fuller House: ဘာကြောင့် Olsen အမွှာ Netflix စီးရီးမှာပေါ်မလာတာလဲ။ - Netflix မူရင်း
Fuller House: ဘာကြောင့် Olsen အမွှာ Netflix စီးရီးမှာမပေါ်လာခဲ့တာလဲ
နယူးယောက်၊ မတ် ၁၆ - (အယ်ဒီတာများမှတ်ချက်။ ပုံကိုအဖြူနှင့်အနက်သို့ပြောင်းလိုက်ပြီ) Olsen အမွှာများ၊ Mary-Kate Olsen (L) နှင့် Ashley Olsen တို့သည် ၂၀၁၅ CFDA Fashion Awards Announcement Party တွင်ထိပ်ဆုံးရှိရာသီဥတုခန်းမတွင်တက်ရောက်ကြသည်။ နယူးယောက်စီးတီးရှိမတ်လ 16, 2015 ရက်တွင်ကျောက်။ (Rob Kim / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Jessica Jones Luke လှောင်အိမ်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်
Hulu မှထွက်ခွာရန် Anime ရုပ်ရှင်လေးကား အကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill Movies ၅၀ - မတ်လတွင်ရုပ်ရှင်အသစ် ၆ ခုထပ်တိုးသည်
Mary-Kate နှင့် Ashley Olsen တို့ Netflix ၏မူလစီးရီး Fuller House တွင်အဘယ်ကြောင့်ခုန်ကျော်သွားရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုကြသည်။
အပြည့်အဝသွန်း အိမ်အပြည့်ပဲ စီးရီး၏ Netflix က reboot ပြန်လာ, အိမ်၊ Mary-Kate နှင့် Ashley Olsen မှအပ
Michelle Tanner တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမွှာ Mary-Kate နှင့် Ashley Olsen တို့သည်ခဏတာသိခဲ့ရသည် အိမ်အပြည့်ပဲ, အဘို့အပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ အိမ်၊ ဒါပေမယ့်အတိအကျမကြာသေးမီကသည်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့မသိခဲ့ပါ။
ယောဟနျသ Stamos, Bob Saget နှင့်အခြား အိမ်အပြည့်ပဲ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ဟာ Olsen အမွှာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ဟာစီးရီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လူတွေက Olsen အမြွှာရဲ့မရှိခြင်းအပေါ်အနည်းငယ်သံသယခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်သည်အထိငါကယ့်ကိုကြည့်ရှု hit မထင်ကြဘူး Fuller House စီးရီးဖေဖော်ဝါရီလ 26 ရက်နေ့တွင်ပြသပြီးပြီးနောက်တနင်္ဂနွေကျော်။
လူမှုမီဒီယာတွင်လူအများစုက Olsen အမွှာများသည်အဘယ်ကြောင့်ဤစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်းမေးမြန်းခြင်းကိုတွေ့ခဲ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအတွက်ထိုအရာအားလုံးကိုထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကနေအစီရင်ခံစာအရ လူများ အဆိုပါ Olsen အမွှာကသူတို့ကပြုမိခဲ့ကတည်းကဤမျှကာလပတ်လုံးခဲ့ကြပြီးနောက်တဖန်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ကိုယ်သူတို့ထွက်မထားချင်ကတည်းကဒါဟာမသက်မသာသရုပ်ဆောင်ခံစားရတယ်။ ဒါကသတင်းအချက်အလက်များ၏အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူမှလာ၏ Fuller House Bob Boyett ။ စီးရီး၏ကြယ်ပွင့်နှင့်ထုတ်လုပ်သူဂျွန် Stamos XM ရေဒီယိုအပေါ်အင်တာဗျူးတွင်ထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုပဲ့။
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ပါပဲ။ အဆိုပါ Olsen အမွှာတော့ဘူးကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ခြင်းအဆင်ပြေမခံစားရဘူး, ထိုကြောင်း ... ဒါမှမဟုတ်ပါက?
မင်းကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် Fuller House Netflix မှာ Olsen အမွှာကိုရည်ညွှန်းကိုးကားခဲ့ဖူးတယ်။ Michelle ဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကနယူးယောက်စီးတီးမှာဖက်ရှင်အင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ Danny Tanner (Bob Saget) ကဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် Kimmy (Andrea ဘာဘာ) သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုရောက်ရန်နယူးယောက်ရှိအလုပ်ကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် Michelle ၏အဝတ်အစားများမှာစျေးကြီးလွန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဟာသတစ်ခုပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ Olsen အမွှာတွင်ထိုပက်ပက်များလားသို့မဟုတ်ပြက်လုံးများကိုပရိသတ်ကိုဟာသလုပ်စဉ်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာလှောင်ပြောင်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကသရုပ်ဆောင်များ၊ ဖန်တီးသူများနှင့်စာရေးဆရာများသာသိသည်။
၏ဒုတိယရာသီအချို့ကိုဟောပြောချက်ရှိခဲ့သည် အိမ်၊ ကနေအစီရင်ခံစာအရသိရသည် ပြည်သူ့။ ဒုတိယရာသီရှိရင် Olsen အမွှာတွေဟာအဲဒီရာသီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီမှာမျှော်လင့်ဖို့ပဲ!
netflix အပေါ်ရာသီ6လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ arrow
amy ပြုပါနှင့် ty နှလုံးအတွက်လက်ထပ်ရန်
netflix အပေါ်လမ်းလျှောက်သေပြီရာသီ7ဖြစ်ပါတယ်